14 Zvino Samsoni akaenda kuTimna,+ akaona mumwe mukadzi kuTimna pavanasikana vevaFiristiya. 2 Naizvozvo akaenda akanoudza baba vake naamai vake akati: “Pane mukadzi wandaona kuTimna pavanasikana vevaFiristiya, zvino nditorerei iye ave mudzimai wangu.”+ 3 Asi baba vake naamai vake vakati kwaari: “Pakati pevanasikana vehama dzako nepakati pevanhu vokwangu vose hapana mukadzi here,+ zvawava kuenda kunotora mudzimai pavaFiristiya vasina kudzingiswa?”+ Zvisinei Samsoni akati kuna baba vake: “Nditorerei iyeye, nokuti ndiye akandinakira.” 4 Kana vari baba vake naamai vake, havana kuziva kuti zvakanga zvichibva kuna Jehovha,+ kuti akanga achitsvaka mukana wokurwa nevaFiristiya, vaFiristiya zvavakanga vachitonga Israeri panguva iyoyo chaiyo.+ 5 Naizvozvo Samsoni akaenda kuTimna nababa vake naamai vake.+ Paakasvika kuminda yemizambiringa yeTimna, chokwadi, tarira! mwana weshumba aiva nezenze akanga achidzvova paaisangana naye. 6 Mudzimu waJehovha wakabva watanga kushanda paari,+ zvokuti akamubvarura nepakati, sezvinongoita munhu anobvarura mbudzana hono nepakati, asi hapana kana chaaiva nacho muruoko rwake. Iye haana kuudza baba vake kana amai vake zvaakanga aita. 7 Akaramba achienda akatanga kutaura nomukadzi wacho; uye akanga achakanakira Samsoni.+ 8 Zvino kwapera chinguva akadzokera kunomutora kuti aende naye kumba.+ Munguva iyi akatsauka kuti atarire mutumbi weshumba iya, uye makanga mava nebumha renyuchi nouchi+ muchitunha cheshumba yacho. 9 Naizvozvo akahumorera muzvanza zvake akaramba achifamba, achidya.+ Paakabata baba vake naamai vake, akabva avapa humwe, vakatanga kudya. Asi haana kuvaudza kuti akanga amora uchi hwacho muchitunha cheshumba. 10 Zvino baba vake vakaramba vachienda kumukadzi wacho, uye Samsoni akaita mabiko ikoko;+ nokuti ndizvo zvaiitwa nemajaya. 11 Pavakamuona, vakakurumidza kutora vaperekedzi makumi matatu, kuti varambe vainaye. 12 Samsoni akabva ati kwavari: “Ndapota, regai ndikutaurirei chirahwe.+ Kana mukandiudza uye mukachidudzira mumazuva manomwe+ emabiko, ipapo ndichakupai nguo dzomukati makumi matatu nenguo dzokupfeka makumi matatu.+ 13 Asi kana musingakwanisi kundiudza, munofanira kundipawo nguo dzomukati makumi matatu nenguo dzokupfeka makumi matatu.” Ivo vakati kwaari: “Taura chirahwe chako, tichinzwe.” 14 Naizvozvo akati kwavari: “Chokudya chakabuda muchinhu chinodya,+Chinotapira+ chakabuda muchinhu chine simba.” Asi havana kukwanisa kududzira chirahwe chacho kwemazuva matatu. 15 Nezuva rechina vakatanga kuti kumudzimai waSamsoni: “Nyengedza murume wako kuti atiudze chirahwe chacho.+ Zvikasadaro tichakupisa nomoto iwe neimba yababa vako.+ Makatikoka pano kuti mutore zvinhu zvedu here?”+ 16 Naizvozvo mudzimai waSamsoni akatanga kumusvimhira misodzi,+ akati: “Unondivenga chete, unondivenga, uye haundidi.+ Pane chirahwe chawakataurira vanakomana vevanhu vokwangu,+ asi ini hauna kundiudza.” Iye akati kwaari: “Chokwadi, handina kuchiudza baba vangu naamai vangu,+ zvino ndinofanira kuchiudza iwe here?” 17 Asi akaramba achimusvimhira misodzi kwemazuva manomwe aienderera mberi mabiko avo, uye pazuva rechinomwe iye akapedzisira amuudza, nokuti akanga amumanikidza.+ Akabva audza vanakomana vevanhu vokwake chirahwe chacho.+ 18 Naizvozvo varume veguta racho vakati kwaari pazuva rechinomwe asati ambopinda muimba yomukati:+ “Chii chinotapira kupfuura uchi,Uye chii chakasimba kupfuura shumba?”+ Iye akatiwo kwavari:“Kudai manga musina kurima netsiru rangu,+Mungadai musina kududzira chirahwe changu.”+ 19 Zvino mudzimu waJehovha wakashanda paari,+ zvokuti akaenda kuAshkeroni+ akauraya varume vavo makumi matatu, akatora zvaakavapfekenura, akapa vakanga vadudzira chirahwe chacho nguo dzacho.+ Akaramba akatsamwa kwazvo, akaenda kumba kwababa vake. 20 Mudzimai waSamsoni+ akazova womuperekedzi+ wake waakanga ashamwaridzana naye.